Nhabvu Mitambo | Webhu dzePC uye Android ▷, Emulator.online
Nhabvu mitambo. Mutambo wakanaka unoenderera uchikwezva vanofarira, nekuwedzera uye nekuwedzera mitambo chaiyo muzita rake. Iwe uchakwanisa kuzadzikisa huwandu hwakawanda wemikana yekutamba yako yaunofarira mutambo.
Uyu mutambo kudaro inokwezva pakati pevakuru nevakuru inowana kukosha kukuru munzvimbo chaiyo. Iko kurota kwako kwekuva mutambi akanyanya kunozadzikiswa. Asi iwe zvakare uchawana sarudzo kana iwe uri mumwe wevaya vanorota kugadzira timu yako uye kuronga mitambo.
Chinhu chakakosha ndechekuti iwe unakirwe kubva muchadenga kana chishandiso chaunofarira iwo manzwiro emutambo wakanaka.
Ungada here kuziva yakanakisa yemahara yemahara nhabvu mitambo? Huya ufare nekunakidzwa kwe mutambo wakanaka kwazvo mupasi! Pano iwe unowana dzakanakisa sarudzo dzaunogona kutamba kubva kune chero komputa kana nhare mbozha.
Iwe unotsunga kuziva iyo yakanakisa nhabvu mitambo?
Mitambo yepamusoro yebhola kurodha
Kana iwe uchida kuita iyo yenhabvu ruzivo kunyanyisa zvakanyanya, iwe une sarudzo yekuita downloads. Kunyangwe kuwanikwa kwemitambo yemahara isiri yakanyanya, kana iwe uchigona kuita zvimwe izvo zvinokuita kuti udedere nemanzwiro.
Zvimwe zvakashata zvaunogona kuwana ndezvekuti vazhinji vakabatanidza kutenga nepo kuwanikwa kwavo kusingagumi. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kudhawunirodha uye tamba mahara.
Nekudaro, pane imwe nguva iwe uchafanirwa kubhadhara kuti ukwanise kufambira mberi uye kunakirwa nezvimwe zvakanaka. Tamba nhabvu uye unakirwe neshamwari dzako, usarasikirwa nemukana wekuve nenguva yakanaka.
Pakati pezvakanaka zvaunogona kuwana ndezvokuti iwe uchave unokwanisa kutamba nhabvu mitambo online nevamwe vatambi. Iwe unogona zvakare kuona ako machisi, ronga mitambo yakoNeiyi nzira, iwe unotsvaga uye kusimbisa yako manejimendi divi.
Tsvaga iwo asina kusimba mapoinzi eboka rako rinokwikwidza uye uchaona zvirinani marongero ako iwe uchangosangana nawo
FIFA zviuru zviviri nesere-2019
FIFA iri pachena yakanakisa uye haidi bhizinesi kadhi. Nguva imwe neimwe optimizations inopfuura zvinotarisirwa. Izvi zvinoonekwa seimwe yeiyo zviri nani simulators yenhabvu, ndiyo inonyanya kukosha uye inoridzwa munguva dzichangopfuura.
Kutenda kumunyori wayo Electronics Arts - Ea Sport, iyo 3D nhabvu chiitiko chauchararama chichava chaicho chaizvo. Iwe uchaiwana yakasununguka ku PC, PS4, Xbox One, Shandura. Huya unakirwe neruzivo, FIFA iri kuita kuti iwe ugare wakabata.
Iyo ine yakakura nzvimbo yekuitungamira iyo, iyo inokupa iwe mhedziso kutonga kwayo. Mukurumbira wese weiyi simulator wakakonzerwa ne kunaka uye realism chiitiko Chii chinopa. Iko kunaka kwemifananidzo iyo yaanopa inovandudzwa mune yega yega vhezheni inoita kuti ive inokwezva kwazvo.
Iyo ine yepamutemo rosters yeumwe neumwe webhora timu. Kunze kweiyo zviri pamutemo mitambo inonyanya kukosha, yenyika uye yepasi rose chikamu. Mienzaniso yadzo iChampion League, Spanish League, English Premier League, uye UEFA Euro Cup.
Izvo zvitsva izvo zvinopa mumazuva edu zvinosanganisira kuvandudzwa kwe kufamba chaiko kwevatambi. Mutambi wega wega anoratidza kugona kwake kunoitika kana zvasvika pakuburitswa kwemuviri uye kudzivirira.
Chitarisiko chevatambi vazhinji chagadziriswa, kuita kuti ruzivo rwako ruve rwechokwadi. Pamusoro peizvi iwe unogadzirisa hunyanzvi mukudzora bhora kunopesana nemabhora akapatsanurwa. Iwe unozogona kuumba iyo nzira dzinogumbura nedziviriro kuchikwata chako
Iyo inoshanda yekubata sisitimu yakagadziridzwa ichichipa chikuru chinoshandiswa. Iwe unowana hunyanzvi hwevatambi vakura senge Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar pakati pevamwe. Saka haugone kupotsa ruzivo rwekutamba nhabvu neiyi inoshamisa chaiyo nhabvu simulator.
Pro Evolution Nhabvu zviuru zviviri nezvipfumbamwe (PES zviuru zviviri negumi nepfumbamwe) iri mune yekutanga mitambo yakanakisa yemitambo inonyaradza simulators nhabvu. Iyi simulator yakagadzirwa naKonami ndeye mahara kuMicrosoft Windows, Android, PS ina, PS nhatu, Xbox mazana matatu nemakumi matanhatu, iOS, GNU / Linux.
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda nhabvu padanho hombe, uyu mukana wakanaka kuti iwe uedze hunyanzvi hwako. Naizvozvi iwe uchakwanisa kuravira manzwiro ekutamba nhabvu mu nzvimbo chaiyo. Iri videogame, mutambi wepedyo weFIFA, inoenderera mberi nekuwedzera mukuvandudza kuti izvienzanise nemupikisi wayo.
Kwemakore mashoma zvinouya kubuda nemhando yakapihwa vashandisi. Nhasi uchakwanisa kuona kuti vatambi vane chinenge chinenge chitarisiko chaicho. Pamusoro peizvi, ivo vakagadzirwa vachitora mamiriro evatambi chaivo, senge kufamba kwavo (kufamba, kutendeuka, kurova, kuneta uye nevamwe).
Zvinosanganisirawo real ligi, zvichiita kuti ive inokwezva. Mitambo yacho iri kushingaira uye nhandare dzinonakidzwa chaizvo. Iwe uchakwanisa kutarisa mutambo nenzira yakapusa uye yakasununguka.
PES mushure menguva inochengetedza kugona. Iwo mavara anochengeterwa kusvika pari zvino uye kunyudzwa kwauchazove nako munyika yenhabvu kwakasarudzika. Huya ufare koira 2019 uye ita kuti chiitiko chako chebhora chisaenzaniswe.
Bhora 3D: Soccer Online
Bhora 3D iri dandara zvakanyatsonaka, ndipo paunowana mukana wekutamba nhabvu yakanaka mu3D.
Izvo zviri nyore kushandisa uye iwe une masimba kune yega uye yega yezviito zvinofanirwa kuitwa. Maawa ari kuzopfuura iwe uchinakidzwa nemitambo yakanaka. Yakasununguka ku Windows uye Mac OS X.
Nhabvu yenhabvu nhabvu
Uyu mutambo wemakomputa hausvike mukurumbira weFIFA nePES. Kunyangwe nenzira iyi, inoramba ichikura uye ichishandiswa nezviuru nezviuru zvevashandisi. Saka usatonge kunze mukana wekunakidzwa ne manzwiro enhabvu.
Mharidzo yayo ye3D ine aesthetic yakapusa. Iyo yemahara yeWindows XNUMX uye iwe unozogona kurodhaunura mahara.
FIFA Nhabvu Nhabvu
Uyu mutambo wenhabvu wakasununguka iOS uye Android. Izvo zvakanaka kushandisa nguva mune chero nzvimbo, iwe uchimirira uye uchida kushandisa imwe nguva yekuvhiringidzika.
Iyo haina chaizvo zvakafanana mhando pakombuta. Kunyangwe nenzira iyi iwe unofara kugadzirisa anotamba uye mamwe emahara ruzivo. Inonyanya kufarirwa nevashandisi. Saka usazeze mune iyi imwe nzira kurodha nhabvu pane yako nhare.
Iine mharidzo iri nyore, inokwezva kutarisisa kwevashandisi vazhinji. Nezvipi kana iwe uri anofarira nhabvu inodakadza unogona kuritora mahara.
Uchakwanisa kutamba machisi, kugadzirisa yako line-up uye kuhwina mari mibairo. Yakasununguka ku Android uye iPhone.
Icho chinyorwa chaicho kuchidzidzira kana iwe uri mupfuti wepfuti anofarira. Izvo zvakavakirwa pazvirango uye unofanirwa kuve nehunyanzvi hukuru neminwe yako. Uchakwanisa tamba iyo online uye iwe une akawanda mamiriro kuti uite zvinangwa zvako.
Iwe zvakare une mukana weku tamba mumaligi mazhinji uye stack machipisi. Iyo yakakura ligi, mubairo muhombe wauchazove nawo. Sezvo iwe paunofambira mberi mumatanho, kuomarara kunenge kuri kukuru.
Kurovera kwekupedzisira Inokupa iwe mukana wekutamba neshamwari dzako uye kurwisa zvirango. Iyo inopa yakasarudzika mitambo inogara kwenguva pfupi yenguva. Izvi zvinorega iwe uunganidze mapoinzi uye mibairo iyo inokubatsira iwe kukunda mazinga.
Rarama ruzivo uye manzwiro nhabvu padanho rinokufambisa zvakanyanya. Kana nyaya yako iri kuburikidza nechirango, usazeze kuzviratidza.
Uyu mutambo we nhabvu online inokwikwidza uye inonakidza kwazvo. Hunhu hwevatambi vayo ndewekuti vane chitarisiko chekatuni nemisoro yavo yakakura kudarika miviri yavo. Iyo ine 3D midhiya ine mufananidzo wevanonyanya kuzivikanwa venhabvu venguva.
Uchakwanisa kupedza maawa uchinakidzwa. Pedzisa matambudziko kwaunofanirwa kuenderera mberi akati wandei undefeated round. Izvo chete zvakashata ndezvekuti iwe haugone kutamba zvine mutsindo neshamwari dzako. Kunyangwe nenzira iyi, goverana chiitiko chinonakidza icho Musoro weSoccer uri kuzokupa iwe.
Wakanakisa mawebhusaiti kutamba nhabvu yemahara
Kune huwandu hwakawanda hwemapeji paunogona kutamba nhabvu mahara, asi kwete imwe neimwe yadzo yakavimbika. Nekudaro, ini ndinokurudzira iwe kuti uzive zvimwe akavimbika uye anokurumidza mapeji uko kwauchazokwanisa kutamba nhabvu pasina zvinonetsa. Nekudaro, iko kushandiswa kweizvo chaizvo zviri pasi pebasa rako rakazara.
Zvino ini ndinopa kwamuri mamwe mapeji anozokutendera iwe utambe nhabvu uye uve nenguva yakanaka.
Iyi webhusaiti iwe unowana iyo zvakasiyana-siyana kune yega uye yega yega manakiro. Iwe uchakwanisa kugadzira mitambo inozotaridza nhoroondo yako semutambi wenhabvu. Pfeka shangu dzako chaidzo uye rova ​​bhora tsoka senge pro.
Fadza shandisa chimiro chemunhu waunofarira mutambi uye ita mitambo inonakidza. Kana kana iwe uchingoda kutora zvirango iwe unogona zvakare kuzviita.
Iwe unoisa danho nevatambi. Kubva pamotokari dzinoedzesera kuita kunge vatambi uye vanonwisa zvibodzwa, kusvika zvekudzidza. Iri peji rakagadzirirwa zera rega rega.
Mariri iwe unowana anodiwa maficha eako makomiki ari kutamba nhabvu, kune chaiwo manhamba evaunofarira vanonwisa zvibodzwa.
Zvisinei nemhando yaunosarudza, ndinokuvimbisa kuti uchave nenguva yakanaka kwazvo uchitamba mahara mutambo waunofarira.
Iyi webhusaiti inokutendera iwe kutamba online mune yehunyanzvi uye inokwikwidza nzira, zvachose mahara. Iwe uchakwanisa kutamba uchipesana nevatambi uye zvikwata kubva kumativi ese epasi. Gadzira hushamwari uye utore chikamu mumaligi nemakwikwi ane mibairo.
Kuti utambe unofanira kupinda peji uye nyora nedata rako rega uye gadzira mushandisi. Sarudza mutauro wenyika yako, zvese izvi mahara. Iwe unofanirwa kusimbisa mushandisi nekuwana yako email.
Tsoka dzepasi pemakumbo inoenderana ne Windows XP uye Windows 7 / 8 / 10. Unogona kutamba pese paunoda, iwe unongoda kuisa zita rako rekushandisa pane iyo peji. Iwe unenge wakasununguka nezvakaitika.
Tungamira mutambi wako uye uzvitore kubva kumitambo midiki kuti a nyanzvi yebhola nhabvu yeboka repasi rese. Uchakwanisa kumudzidzisa uye nenzira iyi kuwana hunyanzvi kuhwina mimwe mitambo. Iwe unozonakidzwa nekunakidzwa kwekutamba, kubudirira uye kunyange kuendesa mabvunzurudzo ayo anozokutendera iwe kuti uwedzere yako nhanho yekubwinya.
Pane ino peji iwe unowana kwaunoshandisa iwe inonakidza uye inovaraidza nguva uchitamba Fast Soccer. Uri kuenda kutamba zvachose vakasununguka.
Nyora pasi zvakawanda sezvaunogona uye rova ​​timu inopikisa. Ndizvo yakapusa kutamba uye inokodzera vana nevechidiki. Nekudaro, kana iwe uri mukuru uye uchida kunakidzwa kwechinguva, usazeze kupinda mumunda.
Tanga kurova bhora izvozvi zvibodzwa zvibodzwa kuitira kuti iwe uwane mukombe.
Iyi chaiyo nzvimbo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzekuve maneja weboka rako raunofarira renhabvu. Nyoresa uye utambe pasina muripo, zvisinei kana iwe uchida kunakidzwa nezvimwe zvakanaka iwe unozokwanisa kubhadhara kuti uzviwane. Tamba kuburikidza chero bhurawuza, uye unakirwe nekunakidzwa kwenhabvu.
Iri peji rinoita kuti unzwe senge maneja wechokwadi, iwe unozogona kusarudza yako yaunofarira timu. Sarudza zvakare iyo vatambi vepamusoro yepasi.
Simbisa timu yako, sarudza kuenderana uye gadzira maitiro ako. Neiyi inoyevedza, goverana neshamwari dzako, vapikise uye ubatane nemaligi avo uye ratidza kuti ndiwe wakanakisa!
Rarama akanakisa Soccer Manager mutambo ruzivo
Nhasi, mapuratifomu emitambo yemavhidhiyo anotongwa neiyo Soccer Manager. Iyi mitambo yenhabvu inoyevedza sezvo musimboti uri mukutungamira kwekunze kwechikwata. Kuti zviite kuti zvinzwisisike iwe gadzirisa marongero, mateki emitambo, kusarudzwa kwevatambi, pakati pevamwe vazhinji.
Aya mativi akakosha mukukosha mumaneja wenhabvu. Isa paganda re murairidzi uye maneja yenhabvu uye huya uye unakirwe neino naka mutambo wekutamba.
Nhabvu maneja 2019
Kana iwe uri chaiye nhabvu fanChokwadi unotakura mudzidzisi wemukati mukati. Saka enda mberi nekutora Nhabvu Manager zviuru zviviri negumi nepfumbamwe. Uyu mutambo unonakidza unoonekwa seakanakisa muchikamu cheManagement.
Iyo haina skimp pane ruzivo rwehutongi hunoteedzera modhi yemakuru uye inoita kuti iwe urarame hombe chiitiko.
Rarama manzwiro ekugadzira yako maumbirwo nemano pachikwata chako chaunofarira. Kunze kweizvi, iwe uchave unokwanisa kuona iyo mitambo neicho chaihwo zvekuti iwe unozonzwa padanho nekuda kwekuvandudzwa kwemutambo wenhabvu.
Kuverenga nezvayo unofanirwa kubhadhara, nekuti haina mahara pasina mutengo. Nekudaro kana uchinge watora pasi, unozonakidzwa Nhabvu Maneja Kubata yemahara paWindows, Mac uye Linux.
In mutambo uyu uchakwanisa kukwikwidza mumaligi einopfuura nyika makumi mashanu, Sarudza kubva kumakirabhu anopfuura zviuru zviviri. Iwe zvakare uchakwanisa kusarudza kubva kune vanopfuura mazana matanhatu vatambi. Ita yega uye yega yega yebasa remaneja muhombe nekugadzirisa timu yako, zvikamu zvekudzidzisa, vatambi, kuchinjisa, mari, vashandi.
Iyo nyowani yakavandudzwa vhezheni zviuru zviviri negumi nemapfumbamwe zveiyi saga inosanganisira nhau senge dzauchakwanisa gadzira masimba pakati pevatambi. Uyezve uyai pamwe nekugadzirwa kweyunifomu, nyatsoongorora vatambi zvakanyanya, zvakadzama.
Kunze kweizvi ine kuvandudzwa kukuru mu maitiro, une ruzivo runokuudza kana zano rako riri kushanda. Huchenjeri hwekunyepedzera hwakatemerwa kuchinjisa hwakagadziridzwa pamwero mukuru. Iye zvino iwe wakawandisa makotesheni, makomisheni uye zvikamu zviri padyo chaizvo neichoicho.
Iwe haugone kupotsa mukana we rarama bhora sezvaunoda mumutambo mukuru uyu.
Uyu mutambo unonakidza wakavakirwa pa Nhabvu komputa makomputa uko kwaungangodaro wakapedza nguva yakawanda uchifara. Zvisinei, yakagadziridzwa pamwe nekubatanidzwa kwevatungamiri. Ndinokuvimbisa kuti iwe uchachida nekuda kwekubatsira uye kubata zvakapusa.
Chengeta izvi mupfungwa, kunyanya kana iwe ukawana kunzwa kwekuti Mutyairi weBhola anonyatsoita zvine ruzivo rwe manejimendi. Izvo zvinouya zvakanyatso kuvandudzwa uye zvakasununguka ku PC-MAC, Hwendefa, nezvimwe zvekushandisa nhare.
Nemutambo uyu wakanaka kwazvo wekutonga unozogona kutonga yako kudzidziswa, kusaina, mari pakati pevamwe vazhinji. Sarudza vatambi vakanakisa uye nevamwe vashandi vako, vavake timu yako uende nayo kumusoro.
Izvo zvine mitambo yechinyakare uye akavandudzwa quirks. Dzimwe dzadzo mapfumbamwe epasi rose makirabhu, vatambi vanopfuura makumi maviri, anopfuura chiuru zvikwata Iwe uchakwanisa kuwedzera nhandare nedzimwe nzvimbo, senge kushambadzira. Iine hurongwa hwematekiniki epamberi uye zvimwe zvinhu zvitsva.
Usarega kurarama ruzivo rwekuva mukuru wenhabvu maneja uye uine nguva yakanaka uchizviita.
Nhabvu maneja 2018
Uyu mutambo wakagamuchirwa neSoccer Manager Ltd iri sarudzo hombe yekutanga ruzivo seye maneja wechikwata. Iyo yemahara papuratifomu Microsoft Windows uye ye Android.
Nayo iwe unogona kuzvibata zvako timu yebhora, kutora kutonga kwehupfumi uye zvemitambo manejimendi. Iva akanakisa mutambo maneja uye batsira kusimudzira timu yako kuti uende nayo kumusoro.
Hunhu hwakanaka hunowanikwa neiyi simulator vanoonekwa neakasarudzika interface. Ane iyo zviri pamutemo marezinesi yezvikwata. Iwe une anopfuura mazana masere mazana emapoka kubva kunopfuura makumi matatu neshanu nyika uye inonakidza mutambi mira. Pamusoro peizvi, iwe uchave unokwanisa kuverengera zviri pamutemo makirabhu nemikombe.
Nhabvu maneja 2018 inokupa iwe mukana wekutarisira zvese zvine chekuita neyemhando yepamusoro nhabvu timu. Basa rako rinenge riri rekugadzirisa yega yega uye yega yezvakakosha zvinhu kuitira kuti timu yako ive yakanakisa. Kubva mukuvandudzwa kwenhandare, kupfuura tsika dzekudzidzira dzevatambi vako, mazano pakati pevamwe vazhinji.
Iyo yakagadzirirwa avo vane shungu nezve manejimendi manejimendi, inotora mukana wekutonga yega yega uye yega yehutungamiriri nemitambo mamiriro echikwata. Huya ufare nazvo nhabvu simulator kuti haungazvidembi.
VaMaster Soccer Manager
Icho chikumbiro chemahara che Android, ine mutoo wemaneja wenhabvu mitambo inokwezva. Kunyangwe paine chokwadi chekuti ine zvakawanda zvekushambadzira, zvakakodzera kuzvipa iwe mukana wekushandisa. Ichi chishandiso chinokupa iwe mukana wekutamba neshamwari dzako.
Iwe une makwikwi matanhatu emahara ekutamba. Pamucheka Champion League, Iyo Spanish League, Iyo UK Premier League, Iyo French League.
Pane zvakawanda zvinobatsira kupfuura zvinokanganisa zvaunazvo kana uchitsvaga chishandiso. Tora mukana uye tamba neshamwari dzako nekuita a nhabvu yemutambo zvakanaka
Chekupedzisira, sekunge iwe uchange wakoshesa, une sarudzo dzakasiyana dzekuita inonakidza chiitiko mu chaiyo nhabvu yemitambo. Imwe neimwe nhabvu simulator ndeye yega tsika. Enda unogadzira zviyero zvako uye kuravira mukuzvishandisa.
Goverana neshamwari dzako uye nemhuri ruzivo rwekutamba waunofarira mutambo. Tora mukana wekugadzira nekutungamira nhabvu yako uye taura mazano ako ekugadzirisa nzira.
Shingairira, rarama kufara kwebhora zvakanyanya iyi rondedzero ye yakanakisa nhabvu mitambo. Ndeipi yawakasarudza kutanga?